एमेले-एम्पी सर्भिस कमीशन | कृष्ण प्रधान
15 वर्ष देखी निरन्तर
एमेले-एम्पी सर्भिस कमीशन
हास्यव्यङ्ग्य कृष्ण प्रधान December 30, 2020, 3:51 pm
ज्याङ्गो दाजुसित भेट नभएको पनि धेरै दिन भइसकेको थियो । आइतबारको दिन पारेर म र मेरा अभिन्न मित्र एस. के.कहाँ सखारै तिनका घर पुग्यौं । इण्डियन कन्सटिट्यूसन नामक पुस्तक पढ़िरहेका रहेछन् । हामीलाई देख्ने बित्तिक्कै ज्याङ्गो दाजु खुशी हुँदै बोले - "आज कताबाट सवारी दुइ दाँत र गिजाको ? मोराहरू हराएका हराएकै भयो ।'' एसके र म अच्चाकाली मिलेर देखेर उनले हाम्रो नाम 'दाँत र गिजा' राखिदिएका छन् ।
मैले तुरून्तै जवाब दिएँ - "जिब्रोसित भेट नभएको धेरै दिन भयो र हाम्रो जिब्रो भयौ कि भनेर नि ।" ज्याङ्गो दाजु सुठीसाह्रै प्याच्चै-प्याच्चै बोल्ने स्वाभावका भएकाले उनको नाम पनि मैले जिब्रो राखिदिएको छु ।
एस. के प्याच्चै बोल्यो - "जिब्रा दाजु भर्खरै बर्ड फ्लूको डरले उम्केको...फेरि कोरोना खेलले....."
कुरा काट्दै ज्याङ्गो दाजु बोले - "ठैट ! के को कोरोनाको खेल ? एनाकोण्डा र फक्सको खेल चल्दैछ । " बुझ्यौ ?
ज्याङ्गो दाजुको जिब्राबाट निक्षेप भएको व्यङ्ग्यवाण बुझ्ने क्षमता हामीसित छैन । जतिञ्जेल उनले उनको व्यङ्ग्यवाणको गाँठो खोल्दैनन् त्यतिञ्जेल हाम्रो एण्टिनामा यो च्यानाइज हुँदैन । फेरि जिब्रो बोले - "तिमीहरूलाई थाह छ मोरा हो ! एनाकोण्डाले फक्सलाई भन्यो, तिमी अब राजा हुनुपर्छ । म छँदैछु, तिमीलाई केही डर हुँदैन । साँच्चै एनाकोण्डाको लहलहैमा फक्श राजा ता भयो नि....एनाकोण्डालाई ओभरटेक गर्ने हुँदा एनाकोण्डाले फक्सलाई क्र्याप्पै पारेर थला बसायो ।" हामी दुइ लाटा-सिधाले उनको कुराको आशय केही बुझेनौं । तरै पनि एस. के बोल्यो - "गजबको ठुङमार्दो क्लासिक टच दिनुभो ता । तर हजूरले यसलाई अझ खुलस्त पारेँ हामीलाई झन् क्लियर हुनेथ्यो । ''
एकजना प्रोफेसरजस्तै भावमा ज्याङ्गो दाजु बोले - आफ्नै गाउँ-घरको राजनितीबारे तिमी लट्ठकहरूलाई लुतो न कनाइ केही छैन न ता टाउको दुःखाइ नै छ । तिमीहरू जस्ता छौ तिमीहरूका नेताहरू पनि काटाकुटा त्यस्तै छन् । सबै एकै ड्याङ्का मूलाहरू ! केही महिना अघि तिमीहरूका गाँउ-घरको सरकार चितपटाङ् भएको होइन ? अहिलेसम्म तङ्ग्रिन सकेको छैन । तिमीहरूको सराकार रगत-मासीले हुइपा भएको छ । एनिमिक सरकार । अब फेरि भोट आउँदैछ होइन ? भोट भनेको के हो थाही छ तिमीहरू दुइ दाँत र गिजालाई ? थाहा छैन...केही थाहा छैन । भोट भनेको नै नेतेाहरूलाई नोट अनि तिमीहरूजस्ता लट्ठक जनता-जनार्दनलाई चोटै-चोट । मैले सबै दृष्टिकोणबाट आन्द्रा-भुँड़ी केलाएर हेरेँ, सरकारको एनिमिया (anemia रक्तअल्पता) बढ़ाउने हाम्रो कन्सटिट्युसनको कुनै क्षमता छैन । हाम्रो कन्सटिट्युसलनलाई कन्सटिपेशन भएको छ । बिकासहरू जत्ति अड़्केको अड्क्यै । यसकारण जनता-जनार्दनलाई यो रोगबाट बचाउँन रिस्रर्च गर्दैछु ।''
हामी वाल्लै परेर ज्याङ्गो दाजु उर्फ जिब्रोको कुरा सुनिरहेका छौं । एउटा सिग्रेट सल्काएर तानी बङ्बङ् धुँवा फ्याक्दै फेरि बोले - " हेर ! चारैतिर हेर । नेताहरू जति सबै स्क्याम्प रोगले ग्रसित छन् । कोही शेयर स्क्याम्प, कोही हाउला स्क्याम्प, कोही टेलिफोन स्क्याम्प, कोही ग्यास कनेक्शन स्क्याम्प, कोही चारो ता कोही जमिन स्क्याम्प । कोही कोरोना स्क्याम्प । सबै शालेहरू स्क्याम्पटिभाइटिस् । कन्सटिट्युसन, सीबीआई, सुप्रिम कोर्टबाट इन्द्रेका बाबु चन्द्रे आए पनि यो रोग निमिठ्यान्न पार्न सक्ने होइन क्यारे ! यो 'नेता' मतिभ्रमलाई जरैसित उखेलेर फ्याँक्नकै निम्ति अहिले म अध्ययनमा व्यस्त र मस्त छु ।"
सिग्रेटको लामो सर्को तान्दै ज्याङ्गो दाजु उर्फ जिब्रो फेरि बोले -हेर सबै काममा शिक्षागत योग्यता र अनुभव चाहिन्छ । तर नेता हुनलाई कुनै योग्यता छैन । बेलाबखत आवश्यक परेको खण्डमा बाघको छाला ओढ़ेर गर्जिन सक्ने हुनुपर्छ । कहिले फेर बाघको खोलभित्र गधा बोकेर हिँड़्न सक्नुपर्छ । कहिले काहीँ धोबीको नीरमा चोबलिएको फक्सस्तो राजनीतिको नीरमा चोबलिएर हिँड़्न सक्नुपर्छ । यति भए मुलूक मारिन्छ । नेता माने नै ट्यालेण्ट । जसले ट्यालेण्ट देखाउन सक्छ ऊ नै त्यति ठूला नेता । यस्ता नेताहरूलाई राजनीतिको क्रिचबाट बोल्ड गरेर प्याभिलियनमा पठाउनुपर्ने हो ।" चुस्दै गरेको सिग्रेटको ठुटालाई एस्ट्रेमा कुच्याएर हाले ।
एस. के बोल्यो - "नेताहरू जतिलाई प्याभिलियनमा पठाए हाम्रो गाउँ-घरको राजनीति कसरी चल्छ ती ज्याङ्गो दाजू ?
ज्याङ्गो दाजुको जवाफ - "खै के चल्दैछ भन्नु ? हाम्रो राजनीति अहिले ब्याकस्ट्रोक हिर्काएर पछि सर्दैछ । यसैले ता म भन्छु माई डियर दाँत-गिजा यो सिष्टम चेञ्ज गर्नुपर्छ अब । जो अत्यन्तै जरूरी छ अहिलेको स्थितिमा र परिस्थितिमा ।''
- "हन तपाई फेरि आन्दोलन गर्ने ताकमा हुनुहुन्छ कि क्यो हो ? - हामी एकैश्वाशमा बोलिपठायौं ।
ज्याङ्गो दाजु गम्भीर भएर बोले - "अहँ ! मेरो आन्दोलन गराइ अब अर्कै प्रकारको हुनेछ । संविधान परिवर्तन गर्ने पक्षमा छु म । खासमा म के चाहुन्छ भने, अब भोट होइन परीक्षा र इण्टरभ्यू मार्फत् एमेले, एम्पी बनाउनुपर्छ । इलेक्शन होइन सिलेक्शन । अचेल ता सबै नोकरीमा सर्फिस कमिशन छ । मैले एउटा योजना बनाएको छु । त्यो हो "एमेले एम्पी सर्फिस कमिशन ।''
फेरि सिग्रेट सल्काएर तीन-चार सर्को तानेपछि बोले उनी - "यो एमेले एम्पी सर्भिस कमीशनको परीक्षा तीन ग्रेडमा हुनेछ । "ए ग्रेड" प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको निमित्त "बी ग्रेड" मन्त्री पदका निमित्त अऩि "सी ग्रेड" एमेले वा एम्पी पदका निमित्त हुनेछ । यी तीन ग्रेडका निमित्त मैले केही प्रश्नुहरूको ढाँचाहरू पनि तयार गरेको छु । यसमा...
कुरा काट्दै एस. के बोल्यो - "...एक दुइवटा प्रश्नहरू सुनुँ न दाजु तपाईँलाई आपत्ति कुनै आपत्ति छैन भने ।"
मोटो रजिष्टर खाताको केही पाना पल्टाएपछि ज्याङ्गो दाजुले तयार पारेका प्रश्नका ढाँचाहरू पढ़्न थाले - "फर ए ग्रेड, एक नम्बर कोइशन, प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीको पद हत्याएपछि गोपनीयता अवलम्बन गरेर कसरी छलकपट गर्ने सकिन्छ ? नम्बर दुइ,.विरोधी दलका सदस्यहरूलाई घूस दिएर सरकार खपत गराउऩे गोप्य रणनीतिहरू विशद् रूपमा व्याख्या गर्नुहोस् । तीन नम्बर, सीबीआई-को आँखामा धूलो हालेर कसरी करोड़ौं-करो़ड़ौं रुपियाँको सम्पत्ति थुपार्न सकिन्छ ?
प्रश्नहरू भट्याउँदै गए ज्याङ्गो दाजु हामी चूपो लागी सुनिरह्यौं - "बी ग्रेडको निम्ति, प्रश्न नम्बर एक, ढाँट नाममा जिम्मेवारी दिन गोप्य कलाकौशल वा रणतनीतिहरू व्याख्या गर्नुहोस् । प्रश्न नम्बर दुइ, बेपारीहरूको स्वार्थ देखाएर कसरी जनदर्दी सरकारो भावमूर्ति तयार पार्न सकिन्छ ! प्रश्न नम्बर तीन, आस्था भोट खारिज हुन अघि सरकारले पदत्याग गर्नु उचित छ वा छैन, कारण सहित नालीबेली केलाउनुहोस् ।
सी ग्रेडको निम्ति प्रश्न नम्बर एक, अरू -अरू ब्याङ्कमा गोप्य एकाउण्ट थुपार्ने तरिका र उपायहरू विशद रूपमा व्याख्खा गर्नुहोस् । नम्बर दुइ, विधानसभामा वा लोकसभामा तपाईँ कति डेसिबलमा घोक्रो फुटाएर कराउनु सक्नुहुन्छ ? नम्बर तीन, लोकसभामा वा विधानसभामा जुत्ता, कुर्सी फ्याँकाफ्याँक गर्नमा. हात मिसामिस गर्नमा तपाईको आँट कतिको छ ? उचित बुँदाहरू सहित नालीबेली खोल्नोस् । नम्बर चार, नोकरीको प्रलोभन देखाएर उम्मेद्वारबाट कसरी रकम लिएपछि सो पचाउनु सकिन्छ ? यसबारे तपाईँको अनुभवको उठान गर्दै विशद् आलोचना गर्नुहोस् ।
पाँच नम्बर, टिप्पणी लेख्नुहोस् - (क) वक आउट, (ख) चम्चागिरी, (ग) लबी, (घ) बुथ क्याप्चर, (ङ) घर बाहिर साइड खेलाइ ।
एमेले-एम्पी सर्भिस कमिशनको निम्ति मैले तयार पारेका प्रश्नका ढाँचाहरू यस्तै छन् ' -सिग्रेटको ठुटो एस्ट्रेमा कोचाऱ्दै ज्याङ्गो दाजु बोले ।
हामी बिलखबन्द पऱ्यौं । ज्याङ्गो दाजुको राष्ट्रचिन्तनले ता हाम्रो गाउँ-घरको राजनीति मात्र होइन सम्पूर्ण देशमै एउटा विप्लव नै ल्याउने छाँट देख्यौं । अम्बेदकर खारिज हुनेछन् । हाम्रो गाउँ-घर मात्रै होइन सिङ्गो भारतवर्ष नै ज्याङ्गो दाजुको बाटामा हिँड़्नेछ । ज्याङ्गो दाजुका प्रश्नहरू साँच्चै गहन छन् । हामी भक्कचूर उल्लसित भयौं । हाम्रो अनुहारको भूगोल पढ़ेर ज्याङ्गो दाजु गम्भीर मुद्रामा बोले - ''शान्त होऊ ! दाँत र गिजा शान्त होऊ ! माध्यमिक र उच्च माध्यमिकमा जसरी मेरिट लिष्ट निस्कन्छन् मेरो यो कमिशनको पराक्षाको पनि म्यारिट लिष्ट निस्किनेछ । प्रथम बीस जना लिएर काउन्सिल अफ प्राइम मिनिष्टरर्स वा काउन्सिल अफ चिफ मिनिष्टर्स् हुनेछ । फेरि बीसजनाको काउन्सिल अफ डेपुटी प्राइम मिनिष्टर्स वा काउन्सिल अफ डेपुटी चिॆफ मिनिष्टर्स् । अब एकजनाको हातमा क्षमता सुम्पेर अब यो देशलाई वान म्यान आर्मीको हातमा कँज्याउनु हुन्न । फेरि मैले प्रोमोशनको कुरा पनि सोंचेको छु । प्रोमोशन मार्फत् एकजना एम्पी वा एमेले विस्तारै-विस्तारै मुख्यमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको काउन्सिलमा जान सक्छन् । त्यसपछि अन्ठाउन्न वर्षमा अवसर ग्रहण र कसैले आफ्नो पद दुइ वर्षको निम्ति एक्सटेन्सन गर्न पनि सक्नेछन् ।''
एस के बोले - '' कुरा ता साठीकै आएन र दाइ ?
फेरि सिग्रेट सल्काउँदै ज्याङ्गो दाजु उर्फ जिब्रो बोले - '' येस । अरू सर्फिसजस्तै सिक्सटी । मेरो कुरा पालन गरे भोट खर्च बचत हुनेछ । भोटो निहुँमा करौड़ौं-करौड़ौं रुपियाँको लेनदेन बन्द हुनेछ । भोट प्रचारको निम्ति करोड़ौं-करोड़ौं रूपियाँ फुर्मास गरिरहने आवश्यक्ता छैन । भोटमा गोला-बारूद, हात-हतियार, तानातान, काटमार, रक्तपात हुनेछैन । अहिले राजनीतिमा चलिरहेको ट्रेण्ड क्रिमिनल्सको आयातीकरण मात्रै हो । यस्ता मालहरूले कन्सटिट्यूशन मान्दैनन् । न ता संसदीय वा परिषदीय नीति नै मान्छन् । विद्याबल होइन बाहुबलमा यिनीहरू पारङ्गत हुन्छन् । मेरो फर्मुला टेर्नु हो भने राजनीति गर्नेले सामान्य भए पनि पढ़ाइ गर्नैपर्छ । कुराको प्रसङ्ग बद्लिँदै - र मैले के अनि कस्तो विषयमा रिसर्च गर्दैछु सो तिमीतहरूले बुझ्यौ होला अवश्यै पनि. होइन ?''
हामी दुवै एकैचोटि बोलिपठायौं - '' बुझ्यौं...आन्द्रा-भुँड़ी सप्पै बुझ्यौं । तर तपाईले जे गर्नुहुँदैछ नि यसको परिणाम नराम्रो पनि ता हुनसक्छ । फेरि तपाईँको फर्मुलालाई मान्यता दिन्छ नै भन्ने ग्यारेण्टी नै के छ र ?''
गम्भीर मुद्रामा ढिट भएर ज्याङ्गो दाजु बोले - ''सबै कुरो ठामठिम पारेर केही दिनभित्रमै म आमरण अनशनमा बस्नेछु । मेरो कन्सटिट्यूशन स्वीकृत हुनेनै छ ।"
एस के बोल्यो - ''तर कति दिनसम्म थेग्ला तपाईँको यो 'एमेले एम्पी सर्भिस कमिशन' ? केही दिनपछि बग्रेल्तै कोचिङ सेण्टरहरू कुना-काप्चामा खोलिनेछन् । प्रश्नपत्रहरू लिक हुनेछन् । फेरि दूर्नीति शुरू हुनेछ ।''
एस केको सुनेर ज्याङ्गो दाजु उर्फ जिब्रो प्रचण्ड अग्निशर्मा भए । आँखा राता-राता पारेर गर्जे - ''जाऊ...जाऊ...तिमेरू जाऊ । गेट लस । तिमीहरू सबै भ्यागुता हौं ...भ्यागुता । म जे गर्छु एक्लै गर्छु ।''
टेबलमाथिको खबरकागत झार-झुर पारे ज्याङ्गो दाजुले । ज्याङ्गो दाजुको छेउमा कुनै हाम्रो यतातिरका नेता हुँदा हुन् ता ती नेताहरूको पनि अवस्था खबरकागत झारझुर भएको जस्तै हुनेथ्यो । ज्याङ्गो दाजुभित्र हामीले हाम्रा गाउँ-घरका लगायत सम्पूर्ण भारतवर्षका मानिसहरूलाई देख्यौं ।
सिलगढ़ी, उत्तर बङ्गाल (भारत)